Home Horyaalka Ingiriiska Daafaca kooxda Manchester City Ruben Dias oo Tilmaamay sirta ka dambeysa guulahooda.
Daafaca kooxda Manchester City Ruben Dias ayaa sheegay in maskaxda ka dhex jirta kooxda ay la mid tahay wax uusan waligiis soo arag, isagoo si cad u tilmaamaya hami aan dhamaad laheyn inuu guuleysto.
City ayaa 12 dhibcood ku heysa hogaanka tartanka horyaalnimada Premier League, halka ay sidoo kale ay baaqi ku yihiin Champions League, FA Cup iyo EFL Cup madaama ay raadinayaan afar koob oo suurtagal ah 2020-21.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Portugal Dias, oo 23 jir ah, ayaa City kaga soo biiray Benfica bishii Sebtember wuxuuna door muhiim ah ka qaatay ololahooda cajiibka ah, isagoo 32 kulan u saftay tartamada oo dhan wuxuuna dhaliyay goolkii sabtidii ee ay 2-1 kaga badiyeen West Ham.
Dias ayaa yidhi: “Waxa kooxda ka dhigaya mid xoogan waa dhamaanteen.”.
Qof walba wuxuu keenaa sifo gaar ah, laakiin kooxdu way badbaaday maxaa yeelay kulligeen waan fiicanahay oo waxaan leenahay maskaxda saxda ah.
Waxaan leenahay hamiga aan dhamaadka lahayn ee dhamaanteen aan rabno inaan badino. Weligeey kuma arkin koox ama Team sida aan haatan la kulmayo.
Rabitaankaan qof walba oo raba inuu qeyb ka noqdo oo doonaya inuu heerkaan sarre ku guuleysto oo aad iyo aad u badan, taasi waa waxa ka dhigaya kooxdan.
Waxa kale oo uu tilmaamay saameynta uu leeyahay tababare Pep Guardiola, kaasoo dib u soo nooleeyay City xilli ciyaareedkan ka dib olole aan caadi aheyn oo 2019-20 ah halkaasoo ay ahaayeen kuwa kaalinta labaad ka galay Premier League isla markaana ku guuleystay kaliya EFL Cup.
Dias wuxuu sheegay in waayo-aragnimada iyo aqoonta Guardiola ay gacan ka geysatay kobcinta maskaxda ee City.
Pep xaqiiqdii waa mid ka mid ah doorarka ugu muhiimsan ee arrimahan oo dhan, ayuu yidhi Dias.
Qaabka uu noo rumeeyo ciyaar kasta, xalalka uu ina siinayo si aan u gaarno wax ka badan kuwa naga soo horjeedda taasina had iyo jeer waxay noqon doontaa meel loo rogo; tayada ciyaartoyda kooxdeena, haddii ay caqli ku filan yihiin fahamka waxa uu sheegayo, waxa uu doonayo.
Laakiin mahad weyn ayey u tahay isaga iyo inuu arko waxa uu ku arko kuwa naga soo hor jeeda si ay noo siiyaan jidka.
City ayaa gurigeeda kusoo dhaweyn doonta kooxda Wolves kulan ka tirsan Premier League oo la ciyaari doono maalinta talaadada.
Previous articleZinedine Zidane oo qirtay in isbedelkii badnaa ee kooxdisa lagu ciqaabay.
Next articleAthletico madrid oo markale Faa’iido heshay maxay tahay Sababta.